နွေရာသီ – DVB
နွေရောက်ပြီဆိုတော့ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားရမလဲ
ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ နွေရဲ့ ဇာတ်လိုက်အပူဒဏ်ကြောင့် လူတွေက နွေရာသီကို မရောက်ချင်ကြပါဘူး။ သူတို့ မကြိုက်လည်း မကြိုက်ချင်စရာပါပဲ။ နွေရဲ့အပူဒဏ်ဟာ ချွေးကိုပိုထွက်စေတယ်၊ ပင်ပန်းမှုတွေကို နှစ်ဆပိုဖြစ်စေတယ်၊ အသားအရေကို ထိခိုက်စေတယ် စတဲ့ မကောင်းတဲ့အချက်တွေ များတာကြောင့် လူတိုင်း နွေရာသီရောက်မှာကို ကြောက်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နွေရဲ့ အပူချိန်ဟာ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတာတွေ ပိုဖြစ်နိုင်တာကြောင့် နွေဆို မရောက်ချင်ကြတဲ့သူတွေ များနေတာပါ။ ဒီတော့ နွေရဲ့ အပူချိန်ကို အံတုဖို့ ဘယ်လိုတွေ ပြင်ဆင်ရမလဲ။ ရေများများသောက်ပါ။ နွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အပူချိန်ကို အံတုနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး အရာကတော့ ရေများများသောက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချွေးထွက်များပြီး ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်း ဖြစ်တာကို ကာကွယ်ဖို့နဲ့ ကိုယ်တွင်းမြင့်တက်လာတဲ့ အပူချိန်ကို ပြန်ထိန်းညှိဖို့အတွက် ရေများများသောက်ကို သောက်ပေးရမှာပါ။ အရည်ဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီး အချိုရည်တွေ၊ အရက်တွေတော့ မသောက်သင့်ပါဘူး။ သောက်ချင်သပဆိုရင်တော့ ရေဓာတ်ဖြည့် အချိုရည်တွေ သောက်ပေးလို့ရပါတယ်။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့ အင်္ကျီတွေ ဝတ်ပေးပါ။ ကိုယ်တွင်း မြင့်တက်လာတဲ့ အပူချိန်တွေ အလွယ်တကူ အပြင်ပြန်ထွက်လို့ရအောင် နွေရာသီမှာ အဝတ်သင့်ဆုံးကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ချည်အင်္ကျီတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်ရွှမ်းတဲ့သစ်သီးတွေ စားပေးပါ။ နွေရာသီမှာ ရေချည်းပဲသောက်ရတာ ပျင်းလာရင် အရည်ရွှမ်းတဲ့ အသီးတွေ စားပေးလို့ရပါတယ်။ အသီးတွေမှာပါတဲ့ အအေးဓာတ်နဲ့ ကြွယ်ဝတဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေကြောင့် အပူအပုပ်များလို့ ဝမ်းချုပ်တာတွေလည်း သက်သာဦးမှာပါ။ အပြင်သွားရင် အကာအကွယ်အပြည့်နဲ့ သွားပါ။ နွေရာသီဆို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေ ပိုများနေတတ်တဲ့အတွက် အပြင်သွားရင် အနည်းဆုံး SPF 30++ လောက်ရှိတဲ့ နေလောင်ကာလိမ်းဆေးတွေ လိမ်းသွားပါ။ နေရောင်နဲ့ အသားနဲ့ တိုက်ရိုက်မထိအောင် လက်ရှည်အင်္ကျီတွေ ဝတ်သွားပါ။ ဦးထုပ်ဆောင်းပါ။ နေကာမျက်မှန်တပ်ပါ။ အိမ်ကိုလည်း အေးနေအောင်ထားပါ။ သွပ်မိုးနဲ့နီးတဲ့နေရာက ပိုပြီး အပူဟပ်တတ်တာကြောင့် နွေရာသီဆို အိမ်အောက်ထပ် အေးတဲ့နေရာတွေမှာ နေပါ။ အိပ်ပါ။ ပြတင်းပေါက်တွေကို ဖွင့်ထားပါ။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းမှ ပူတဲ့လေတွေ ဖလှယ်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ပူလွန်းလို့ဆိုပြီး ပန်ကာလေကို တချိန်လုံး မခံပါနဲ့။ ချွေးနဲ့ ပြန်အအေးပတ်တတ်သလို လေဖြတ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းလည်း ပိုများတတ်ပါတယ်။ အစားသောက်တွေကို ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ပူနွေးတဲ့ရာသီဥတုကြောင့် စားစရာတွေ ခဏလေးနဲ့ ပျက်စီးသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စားစရာတွေကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ သေချာသိမ်းဆည်းထားဖို့ မမေ့သင့်ပါ။ မိုးလေဝသ သတင်းကို အမြဲနားထောင်ပါ။ ဘယ်နေရာမှာတော့ နေ့အပူချိန် ဘယ်လောက်ရှိနိုင်တယ်၊ ဘယ်နေရာမှာတော့ တိမ်ထူထပ်ပြီး ဘယ်မှာတော့ သာယာမယ်ဆိုတဲ့ မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက်တွေနဲ့ အဆက်မပြတ်စေပါနဲ့။ မနက်ဖြန် အပူချိန်အရမ်းများမယ်လို့ မိုးလေဝသက ခန့်မှန်းထားမယ်ဆိုရင် မသွားမဖြစ် ကိစ္စတွေကလွဲလို့ နေ့ခင်းပိုင်း နေပူထဲ မထွက်ပါနဲ့။ ကိုယ့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ဂရုစိုက်ရမှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ ။ ရေးသားသူ - Dr. Thin Yadanar @ Frances ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ - Dr. Thurein Hlaing Win. ဤဆောင်းပါးကို DVB ၏ မိတ်ဘက် ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာဝက်ဘ်ဆိုဒ် hellosayarwon.com မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။